JINHUA Ampionòny VEHICLE.CO., LTD dia Company Azonao Atao ny Miantehera amin'ny Ary Faritany Jinhua, Zhejiang Province, Sina, izay nifototra ny tanjona ao amin'ny maitso sy ny hery-mamonjy ny fitaterana, ka hanome ny olona ara-pahasalamana sy ny aina mitaingina fihetseham-po. Ny orinasa no tena mpanamboatra sy hivarotra isan-karazany ny e-bisikileta, mivezivezy môtô, sns seza misy kodiarana herinaratra
Araka ny fampandrosoana sy famokarana afaka, rafitra fanaraha-maso henjana tsara, ary ny manan-karena traikefa eo amin'ny fanondranana ny tsena isan-karazany. Fantatsika ny fomba manolotra vokatra tsara sy ny asa fanompoana tsara ho an'ny mpanafatra sy ny mpizara manerana izao tontolo izao. OEM / ODM ary ny sasany dia misy asa fanompoana customization. Ary isika koa dia afaka manome toro-hevitra misongadina ho an'ny mpanjifa vaovao raha ilaina.
JINHUA Ampionòny VEHICLE.CO., LTD foana vaovao mitady mpiara-miasa na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao ianao. Amin'ny Certifications ny EN15194, taona, Ul, ROHS misy ny hamela anao mora manafatra any Eoropa, na eo amin'ny fitoerana rehetra ianareo.
JINHUA Ampionòny VEHICLE.CO., LTD miarahaba anareo tonga soa amin'ny mpiasa tena manokana, traikefa rehetra amin'ny manan-karena eo amin'ny sehatry ny herinaratra bisikileta sy môtô mivezivezy.